FITAIZANA ALIKA KELY 3 VOLANA - SPENCER THE PIT BULL - ALIKA
Fitaizana alika kely 3 volana - Spencer the Pit Bull
Andro iray amin'ny fiainana miaraka amin'i Spencer the American Pit Bull Terrier puppy. Herinandro fahefatra an'i Spencer - 13 herinandro, 25 pounds, 15 1/4 santimetatra avy amin'ny tany ka hatrany amin'ny tendrony avo indrindra amin'ny soroka (malazo).
Mihatsara kokoa i Spence amin'ny tsy fanenjehana saka, na eo aza izany dia mbola hataony ihany izany raha toa ka tsy milamina izy ary tsy eo izahay miteny hoe 'avelao.' Izaho dia tsy maintsy nanao ezaka bebe kokoa mba hamelana azy hamela azy ireo irery, ankehitriny dia baiko am-bava tsotra na bara iray tsy misy teny no hanao izany. Raha any ivelany i Spence ary henontsika manomboka mikororoka izy dia fantatsika fa tonga ny fotoana tokony hitenenana hoe avelao io! Ny zava-misy fa ny saka dia mbola eto ary handeha eo akaikiny, ary mifikitra aorian'ny fanombohan'i Spence manenjika anay ary manitsy antsika, dia midika fa mahatsapa ireo saka fa tsy tena manimba izy. Raha manana fikasana hafa ilay alika kely ankoatry ny filalaovana lalao fotsiny dia minoa ahy fa ho fantatry ny saka izany ary tsy hijanona eo akaikin'ny lavarangana akaiky azy izy ireo. Mila vitsivitsy monja amin'ireo saka ireo aho mba hamatotra azy tsara hanampy amin'ny fampianarana azy!
Nandeha tamin'ny seza solosaina i Spence ary nanomboka nitsako tamin'ny fametahana mpampifanaraka ny haavony. 'Atttt!' Nijery ahy i Spence ary lasa nandeha.
Taty aoriana dia tratrako io zaza io manomboka moka amin'ny sisin'ny vilan'ny zava-maniry! 'Attttt!' Spence, raiso ity taolana ity fa tsy.
Niala sasatra teo am-pandriana alika i Spencer, nefa nitsangana tampoka ary nihazakazaka nankany an-dakozia. Segondra vitsy taty aoriana dia niverina niaraka tamin'ny lamba famaohana taratasy izy ary nanomboka nitsako azy. Spence, taiza no nahazoanao ilay lamba famaohana taratasy? Ary tsy hitanao eo amin'ny fandrianao ve io taolana io? Ny taolana dia atao fitsakoana fa tsy lamba famaohana! 'Atsipazo io!' Raisiko ilay lamba famaohana taratasy ary omeko azy ny taolany.
Spencer! Navelako tany ivelany taminao ny flip-flop-ko, dimy minitra dia hohaninao daholo! Jereo fa fantatro fa tianao ny fofon'ny feed fa AZAFADY, tsy hitanao ve ny taolana ao aorianao !? 'Avelao!'
Azoko antoka fa tsy napetrak'i Amie tao anaty farafara alikao ny flip-flop-ny. Manaikitra izany ao raha ny noahiahiko. 'Avelao!' Eto, raiso ity taolana ity fa tsy.
Isa amin'ny fitsangatsanganana Flip-Flop
Navelako teo afovoan'ny gorodona ny flip-flop tiako indrindra. Rehefa afaka kelikely dia nitsangana avy teo amin'ny fandriany alika i Spence ary nanomboka nanimbolo azy ireo. Saika lasa nandeha izy nefa niverina ary nanimbolo azy ireo bebe kokoa. Raha vantany vao hitako nivoha ny vavany, 'HEY!' Nitsambikina i Spence ary nandao ny kiraro. Izay no fotoana voalohany nahatratrarako azy tamin'ny fihetsika te-hitsako kiraro.
Mbola tsy nisy lozam-pifamoivoizana intsony hatramin'ny andro voalohany nitondranay an-trano an'i Spence ary mbola tsy nankany amin'ny trano fidiovana tao an-trano izy hatramin'ny herinandro lasa teo (mandondòna hazo). Tena mafana sy mando ny aty ivelany ary fantatry ny alika fa raha miondrika ivelany izy dia mahazo miditra ao an-trano. Mbola tsy azo atokisana ao anatiny toy ny alika antitra izy. Tsy maintsy avoaka avy hatrany izy rehefa avy misakafo sy mijery fambara fa tsy maintsy mandeha toa ny mihodinkodina, mandeha amin'ny varavarana na mitsoka manodidina. Izahay dia mamoaka azy isaky ny roa ora, raha tsy hoe matory izy. Rehefa mifoha izy dia tsy maintsy entina any ivelany.
Heveriko fa tsy nandondona mafy tamin'io hazo io aho. Nandeha teo am-baravarana i Spencer ary tsy nisy nahatsikaritra. Nitsambikina avy hatrany teo amin'ny karipetra atsipy teo am-baravarana izy. Sambany izy no nandroba tao anaty ankoatry ny alina voalohany tao anaty vatany. Nanapa-kevitra ny hividy karipetra vaovao ho an'ny varavarana fidirana izahay satria efa nijery an'io ihany koa izy. Nodiovinay izy io, na izany aza heveriko fa mbola mitohy ny fofona. Faly fa rug kely fotsiny no soloina mora sy mora vidy.
Azoko antoka fa nanao jinx ny tenako tamin'ny fieritreretana hoe tena tsara ny fampiofanana poti Spence. Tsy maintsy nihazakazaka kely aho ary nilaza tamin'ny ankizy mba hijery an'io alika kely io rehefa tsy eo aho. Nody aho teo afovoan'ny gorodona fandraisam-bahiny.
Indroa mandeha i Spencer no nankeo amin'ny solosainako ary nibanjina ireo jiro. Sambany aho tsy nilaza na inona na inona taminy satria izy nijery fotsiny dia lasa nandeha. Ny fanindroany dia toa liana te hahafanta-javatra ihany izy ary noteneniko izy handao izany. Matahotra aho sao hanapa-kevitra izy fa kilalao ho azy ny solosainako. Nandao azy i Spence. Tsy maintsy jereko izany. Tsy afaka manohy manoratra fanavaozana an'i Spence raha mitsako ny solosaina ny alika!
Manao fanazaran-tena hiandry eo am-baravarana
Amie dia manao fanazaran-tena amin'ny fiandrasana an'i Spence eo am-baravarana alohan'ny handehanana any ivelan'ny fahaizana fiarovana tsara mba tsy hanana ny alikanao bolt satria misokatra ny varavarana. Bruno dia mpomba ny taloha tsy hiady saina ary hiandry miaraka amin'i Spence.
Nandeha tany ivelan'i Spence aho mba hihaona. Tampoka teo dia nanomboka nihazakazaka izy ary tamin'izay no tsapako fa teo alohany ireo vorona! Lavitra loatra aho ka tsy afaka nanao karazana body block fa nanomboka nihazakazaka nanatona azy aho, 'Hey! Hey! Rrrrrrrrrrr !!! ' Nihemotra i Spence ary nihemotra avy hatrany aho mba hampahafantatra azy fa izay ihany no tadiaviko - ny hampijanonany ny fanenjehana azy. Nanapa-kevitra i Spence fa hihi. Hitako fa raha mimenomenona azy aho dia mamaly tsara. :)
Alika reraka dia alika tsara
Hitako fa tsy misy mandreraka alika amin'ny alàlan'ny kitapom-batsy, izay alehan'ny alika rehetra amin'ny fehy. I Spencer dia mandeha an-tongotra isa-maraina ary iray hafa amin'ny alina, ary matetika kosa ny antoandro (indraindray bebe kokoa). Manao karazana dia an-tongotra samy hafa miaraka aminy isika, manomboka amin'ny kiraro amin'ny fehikibo mankany amin'ny kiraro tsy misy fehy, mankany amin'ny fitsangantsanganana any anaty ala mamela azy hihaza miaraka amin'i Bruno. Amin'ny diabe izay itadiavany mihaza an'i Bruno any anaty ala dia manarona tany betsaka izy ary mihazakazaka be sy mampiasa ny orony. Rehefa miverina avy eny amin'ireny tongotra ireny isika dia reraka, na izany aza dia mientanentana be ny sainy ary tsy vonona hatory izy. Milalao matetika i Bruno sy Spence aorian'ny fiverenanay. Mikorontana noho ny hafaliana ny sain'izy ireo.
Amin'ny diabe izay ahamonosan'ny alika rehetra, ny faharetan'ny fotoana anazaranay azy dia mitovy, na izany aza dia mandeha ny alika, tsy mihazakazaka. Manaraka izy ireo. Tsy mahazo mandeha eo alohan'ilay mitazona ny tadiny izy ireo ary ataontsika tony daholo ny alika izay mandeha miaraka amintsika rehefa mandalo amboa hafa. Ampianaro izy ireo tsy hiraharaha ary handeha foana. Izahay dia tsy mitahiry ny tany kely kokoa amin'ny ora mitovy. Rehefa miverina avy amin'ny iray amin'ireto karazana diabe ireto dia alika hatory avy hatrany ny alika rehetra. Tsy misy filalaovana mampihetsi-po. Voadaroka ny alika ary te hatory fotsiny.
Hafahafa izany ary raha nisy nilaza tamiko izany folo taona lasa izay dia tsy azoko antoka fa hino azy ireo aho. Saingy, marina izany. Rehefa mandeha alika mitarika ianao dia ataovy ambony voditongotra izy ireo, mitazona azy ireo ho tony sy manaraka anao, dia mandany ny alika ara-tsaina ka izay tadiavin'izy ireo fotsiny dia ny matory rehefa miverina izy ireo. Tonga lafatra ho an'ireo izay miasa na tsy atoandro. Izaho dia any an-trano miaraka amin'i Spence no betsaka, na izany aza, andro vitsivitsy dia tsy maintsy avelako izy na andro rehefa handeha hitsangatsangana fiara lava izy, azonay antoka fa ny dia an-tongotra maraina dia fitsangatsanganana entana tokoa. Izy io dia miantoka fa faly izy ao an-trano matory ao anaty vatany raha tsy eo aho na miala sasatra ao anaty fiara. Nandeha fonosana i Spence tamina toerana nandrenesany farafahakeliny indray mandeha isan'andro. Indraindray izany dia an-tongotra izany fa amin'ny alina fa tsy amin'ny maraina arakaraka ny drafitsika anio. Raha fantatro fa manana lalana an-tongotra adiny iray sy sasany atolotra miaraka amin'ny namana izahay ny alin'iny ihany dia mety hiara-dia aminy aho fa noho izany dia manana angovo ampy izy mandritra ny alina. Rehefa mihalehibe izy dia tsy mila miahiahy momba ny fitsitsiana angovo kely ho an'ny diantsika mandeha amin'ny alina miaraka amin'ny namana sy ny alik'izy ireo. Manana fahatsapana aho fa hametraka kitapo lamosina aminy hampiadana azy. :)
Ny alika mandeha mitsangatsangana eny amoron-dàlana izay andehanany eo alohany sy hitarihany ny olony, mitroka amina izay tiany, miverina reraka ara-batana, nefa tsy reraky ny saina.
Didy 'alatsaho io'
Mandritra ny 13 herinandro dia manomboka mamaly ilay baiko 'drop it' i Spence. Teo an-tokotany izy ary hitako fa nisy zavatra naloaky ny vavany. Nanatona azy aho ary niteny hoe: 'alatsaho io.' Nororan'ilay alika kely tamin'ny tany ilay izy ary niandry izay ho hataoko avy eo. Niondrika aho ary naka izay nananany. Mazava ho azy fa sombintsombin'ny poop io! Nanomboka nanetsiketsika ny rambony i Spence. Tsy fantatro raha ny pookany manokana, ny an'i Bruno na ny saka ', saingy ataoko fa poop ny poop. Yuck!
Oadray, Spence, inona izao no anananao ?!
'Atsipazo io!' Oadray, saobakaka maty novonoina io. Double Yuck! Ireo zavatra tsy maintsy kitikitiko noho ny aminao. Omeo ahy izany!
Manenjika ny vorona
Tany ivelany niaraka tamin'i Spence aho. Teo koa ireo guineas. Spence iray segondra dia nanaraka ahy ary ny manaraka dia nanenjika vorona mafana izy! 'Hey!' Ny teniko dia tsy hanao na inona na inona tamin'ity indray mitoraka ity fa tao amin'ilay faritra i Spence. Nihazakazaka taminy aho, na izany aza tsy hahatratra ity indray mitoraka ity aho, fa i Spence dia tamin'ny hafainganam-pandehany mety hahatratrarany ilay vorona fotsiny. Nihalalaka araka izay azoko natao tamin'i Spence aho ary nanao ny zavatra hany noeritreretiko, natsipiko tany aminy ny vozon'akanjo Bruno's Illusion. MATY! Voa teo amin'ny sisiny io. Tsy natsipiko mafy izany, ampy hanohina azy fotsiny sy hisarihana ny sainy. Tonga teo amin'ny fijanonana mikorisa i Spence. Nandeha nanatona azy niondrika aho mandra-pisehoany ny famoahana izany tamin'ny nipetraka, nanondrika ny lohany ary hiala sasatra. Nihemotra aho avy eo mba hampahafantatra azy fa izay no tadiaviko. Tany ivelan'ny ora manaraka izahay niaraka tamin'ny vorona ary i Spence no nijery azy ireo fotsiny ary niverina tamiko. Manomboka mahatakatra izy fa tsy voafetra ny fanenjehana azy ireo. Tsy mbola tapitra anefa ity adin'ny vorona ity.
Dia mankany amin'ny Vet vonjy maika
Tsapako fa tsy salama tsara i Spencer rehefa tsy nisakafo hariva izy. Izy koa dia tsy nanana faniriana hitsakoana siligaoma vaovao ka tsy hitovizany. Vao maraina ny andro dia nahazo fihinan'ny sahona maty iray hafa indray izy ary nateliny! Nijery am-bavany aho mba hanandrana haka azy io, fa tsy eo intsony ary ny fofony dia toy ny faty lo. YUCK! Ankehitriny satria tsy salama izy dia niahiahy momba ny taolan'ny sahona ao an-kibony aho. Reraka be i Spence saingy tsy te handry izy ary nimonomonona ary nanomboka nihovotrovotra. Efa alina ny andro tamin'izay ka nentinay tany amin'ny mpitsabo natiora ER izy mba hahazoana antoka. Niverina ara-dalàna ny taratra x-kibo. Rehefa naverin'ny tech tech azy tao amin'ny efitrano izy taorian'ny nahazoany ny taratra x dia nipetraka tao aorinan'i Spence izy, niezaka ny hamerina azy tany amin'ny efitrano mialoha azy. Nijanona teo am-baravarana i Spence, tsy te hiditra ao amin'ilay efitrano alohany. Tena nahaliana ahy ilay zaza. Na dia narary kibo aza dia tadidiny ny fombany.
Spence dia nisy fizarana fivalanana roa tao amin'ny mpitsabo nify izay nahatonga ahy hieritreritra sahona lo amin'ny fofony! Double Yuck! Nomena ranoka IV tao ambanin'ny hodiny izy mba hisorohana ny tsy fahosan'ny rano ary nalefa nody niaraka tamin'ny meds.
Amin'ny 2:00 maraina izao ary matory ao amin'ny fandriana alika eo akaikin'i Bruno i Spence. Ny fandriana alika dia mamela azy hitazona ny tapany ambony ambony noho ny sisiny avo, fa ny vatony kosa manery azy handainga zavatra tsy azony atao. Mieritreritra ny hanipy ilay fandriana alika be ao anaty vatony aho mba hahitana raha tsy mahita torimaso farafahakeliny adiny roa aho. Tsy avela avela hivoaka amin'ny vata misy azy ny fivalanana, fa kosa tsy tokony hipetraka eo izy raha maharary.
Tsia, tsy mety ny fandriana alika. Raha ny tokony ho izy dia nahazo kitapo fatoriana efa antitra toy ny zaza aho ary aforiko ka natsangana tamin'ny sisiny izay namela an'i Spence hampiakatra kely ny tenany. Toa ampy izany satria niverina natory avy hatrany izy. Napetrako ny fanaraha-maso ny horonantsary manondro azy mba ho hitako tsara raha salama tsara izy. 2:30 maraina, soava alina, daholo.
Nifoha tamin'ny 7:00 maraina toy ny mahazatra i Spence ary niverina tamin'ny toetrany taloha. Tsy mivalana intsony, tsy mandoa intsony hatreto androany dia miara-milalao amin'i Bruno izy ary manomboka mivovo amin'ny saka aza. Yep, miverina amin'ny toetrany taloha. Spence, MBA ajanony ny fihinanana zavatra maty, poop ary izay zavatra maharikoriko hitan'ny oronao eny ambonin'ny tany!
Nanomboka nanomana ny sakafo maraina an'ny alika aho. Bruno toy ny mahazatra dia lasa nandeha nandry niandry. Nipetraka i Spencer ary nijery. Rehefa afaka kelikely dia tsy nanam-paharetana izy ary nihiaka, 'Shhhh!' Imbetsaka izahay no nanao an'io talohan'ny nijanonany. Tsy afaka nomeko azy ny vilia fihinanany mandra-pijanony tsy hitoloko. Mila mianatra faharetana sy fomba fanao izy. Tsy mangataka sakafo ianao. Miandry ianao. Ny fiandrasana dia fampihetseham-po tsara ho an'ny alika rehetra.
Nosokafako ny varavarana fidirana mba hamoahana an'i Spence. Nandeha ankavia nankany amin'ny fandriana alika i Spence ary saika hanidy ny varavarana aho ary hiverina tao anatiny rehefa tsikaritro fa rehefa avy nipetraka izy dia nisy zavatra tena nahaliana azy. Nibanjina ny ankavanana izy. Nitodika tany ankavanana aho ary nahita izay nojereny — ny iray amin'ireo peaeninay. Navela hijery izy, na izany aza, niandry aho sao hisy fihetsiny amin'ny fomba hafa. Segondra vitsy taty aoriana dia nanomboka nanatona azy i Spence. Mora ity iray ity. Teo anelanelan'i Spence sy ilay vorona aho. Nandroso aho ary nosakanan'ny vatana. Nifindra niankavanana izy, nivadika ankavanana aho. Nijery ahy izy dia nomeko azy ny iray amin'ireo endrika tsy nankasitrahako. Ny vatan'i Spence dia avy amin'ny henjana sy mailo ka miala sasatra, nefa mbola liana te hahafantatra. Nilaza tamiko izany fa azony ny nolazaiko. Nilaza aho fa avelao irery ilay vorona.
Niala teo amin'ny lavarangana ilay paiso. Koa satria tsy tao anaty toe-javatra feno fientanam-po i Spence izay toa toa mbola tadiaviny ihany ilay vorona — tsy nifoha ny rambony, ary tsy nitazona ny lohany ambony sy niavonavona izy - navelako hijery tsara azy i Spence. Tena mila mijery an'i Spence sy ny vorona aho.
Miomana amin'ny fahefatra Jolay
Ny marainan'ny fahefatry ny volana jolay dia nataoko antoka fa ny diabenay maraina dia tena an-tongotra mandehandeha izay alika rehetra mandehandeha amin'ny fehikibo mba hanasatra azy ireo amin'ny fahafenoana, ara-tsaina sy ara-batana. Arakaraka ny havizan'izy ireo no hahitan'izy ireo tsara kokoa ny baomba henony mandritra ny andro.
Niato isaky ny vavahady aho mba hanomezana fotoana an'i Spence hanandrana sy hikorontana eo alohany. Tsia, toa tsy milamina ny fomba fanaony.
Nijanona i Spence raha mbola teo am-pikatsoana kely tamin'ny fiandohan'ny dia. Tsy nitsahatra niherika ny lalana niavianay izy, indraindray nijanona sy nijery ny manodidina azy toa tsy azony antoka loatra. Isaky ny manome azy iray segondra aho dia avy eo namporisika azy handeha foana, ary omeko tosika kely izy. Nandeha tsara izany. Nisy fotoana aho nanapa-kevitra ny hitsapa azy. Tany amin'ny faritra azo antoka izahay ary niandry azy hitsahatra tsy handeha intsony aho. Rehefa nanao izany izy dia nazerako ny tadiny ary nandeha foana aho. 'Miandrasa ahy!' Nihazakazaka nanatratra ny fonosany i Spence. Noraisiko ny tadiny ary lasa aho. Rehefa afaka kelikely dia niditra tao amin'ny faritra fandehanana i Spence ary nijanona tsy nijanona intsony.
Taorian'ny nahatongavan'i Spence teo amin'ny sehatry ny fandehanana tsy nijanona aho dia niasa tamin'ny fametrahany ny alika hafa tao anaty kitapo aho nandritra ny diany. Nanitsy azy imbetsaka aho taloha noho io fihetsika io satria ireo alika zokinjokiny dia tsy mankasitraka ny milelaka ny vavany rehefa mandeha izy ireo. Tariky kely kely ankehitriny ary 'Hey!' Fotsiny. nosakanana izy ary notohizany nandeha foana. Fony izy vao nianatra nandehandeha tamin'ny tadiny dia navelako hisosa io fihetsika io rehefa mandeha i Spence, na izany aza dia azony ankehitriny hoe inona ny vozon'akanjo sy fehy ary fantany fa miara-mandeha ireo entana ao aminy.
jack russell shih tzu mifangaro
Rehefa niverina tany amin'ilay làlana lehibe mitondra any an-trano izahay dia reraka ny alikaola, saingy mbola tsy maintsy nody tany an-trano izahay ary ny havizanana no anton'ny diany rehetra. Faritra azo antoka io ary nosokafako ny kiran'ny alika mba hahafahany hanaraka. Hianjera kely any aoriana i Spence dia manafaingana azy hahatratra ilay izy. Mora ho azy izany noho ny mijanona amin'ny dingana tsy miovaova. Hitondra azy ireo handeha hitsangatsangana amin'ny tolakandro indray aho ka tsara sy reraky ny hariva.
Fihetseham-po amin'ny afomanga
Toa tsy niraharaha firy momba ny afomanga i Spencer. Nitandrina izahay mba tsy hanome azy firaiketam-po, raha sendra izany. Raha nanomboka nahatsapa tsy fahatokisan-tena izy ary nampiofaninay izy, dia nilaza taminy izahay fa ny tsy fahazoana antoka no fomba tianay hahatongavany. Na izany aza, ny alika dia mahatsapa amin'ny fotoana anomezanao azy ny fitiavana dia izay no heveriny ho tsapany. Ny ilain'ny alika mandritra ny fotoanan'ny tahotra dia ny olona matanjaka kokoa misakafo. Olona hitan'izy ireo fa maka ny fonosana hahazoana antoka fa ho tafavoaka velona izy ireo. Tsy olona manamarina ny tahotra.
I Bruno kosa nandady tao anaty vata kely an'i Spencer ary nijanona tao alina.
Nanao hadisoana tsy nahy aho Bruno the Boxer fony izy 2 1/2 volana . Tany amin'ny zaridaina fialamboly izahay ary nisy oram-baratra mahery. Nandeha nitady lamba izahay rehetra ary nihazakazaka teo ambanin'ny dabilio i Bruno. Nosintoniko izy ary notazoniko. Ny olona manodidina anay dia nisoloky azy ary niresaka taminy tamim-pitiavana. Tamin'io taona mbola kely io dia nilazana i Bruno, eny, matahora ny kotrokorana dia izany no tianay ho tsapanao. Nanomboka tamin'izay dia natahotra ny oram-baratra izy. Tsy tsapako raha tsy taona maro taty aoriana namaky ny pejy bilaoginy 12 herinandro ny antony natahorany ary toa nihombo tsimoramora ilay olana. Azo inoana indrindra satria indraindray dia mihomehy ny olona noho ny tafio-drivotra sy ny afony, izay endrika fitiavana ihany koa. Mahatsiaro ho sambatra ny alika ary mandray azy rehefa faly amin'ny fahatsapany ianao. Tany ivelany koa izy rehefa nanamboatra ny afomanga natrehintsika indray mandeha izahay ary nisy vahiny nanome azy fitiavana. Taorian'izay dia korontana nandritra ny fotoana kelikely izy, nihazakazaka hatrany amin'ny tohatra raha tsy tao an-trano izahay, nanandrana niditra tao amin'ny efitranon'ny olona iray, rehefa fantany fa tsy avelantsika hiakatra akory izy. Niezaka ny ho tonga amin'ny toerana matanjaka indrindra izahay. Nanetsiketsika zavatra mahatsiravina i Bruno ary nanomboka nilentika.
Raha vantany vao natambatro ny zavatra nahatonga ny tahotra an'i Bruno ny sary iray manontolo dia natambatra ihany koa ny sary momba ny fomba fiasa amin'ny fanamboarana azy. Nandritra ny tafio-drivotra dia nanomboka nitondra azy teny ivelan'ny lavarangana izahay, tsy niresaka taminy, fa tsy niraharaha azy ary nanandrana nahatsapa ho matanjaka ao anatiny araka izay azonay anehoana azy fa tsy natahotra ny oram-baratra izahay.
Tsy nahalala izany aho raha tsy taorian'ilay zava-misy ary tsy namela azy io, fa nanapa-kevitra ny hiara-miasa aminy Amie indray mandeha tamin'ny alalàn'ny jogging azy tao anaty oram-baratra. Ny tetikadiny dia ny handany ny heriny ary miaraka amin'izay dia avelao izy hahatsapa fa tsy natahotra izy. Tena nanampy be izany ary i Bruno dia nijanona tsy nihazakazaka tamin'ny tohatra raha mbola tsy tao an-trano izahay ary nisy oram-baratra. Manohy mitondra azy eny am-baravarana izahay mandritra ny tafio-drivotra indraindray ary tsy mihozongozona intsony i Bruno mandritra ny oram-baratra na ny afomanga, fa mitady ny iray amin'ireo olona ao amin'ny fianakaviana izy ary mandry eo akaikin'izy ireo. Nanomboka niditra tao anaty vatam-paty Spencer koa izy, dia ilay boaty taloha. Mitandrina izahay mba tsy hiresaka na hihomehezana azy, hanafosafo azy na hanome azy karazana fitiavam-pitiavana fotsiny rehefa tsy azony antoka ary toa manatsara hatrany hatrany izy.
karazana omby ao anaty lavaka misy sary